Qoys U Dhashay Dalka Hindiya Oo Cunsuriyad Ku Eedeeyay Shirkada Diyaaradaha Ee British Airways ! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Qoys U Dhashay Dalka Hindiya Oo Cunsuriyad Ku Eedeeyay Shirkada Diyaaradaha Ee...
Shaqaalaha ka hawlgala shirkadda diyaaradaha Airways ayaa waxay socdaal ka joojisay isla markaana u diiday inay diyaaradaasi raacaan qoys u dhashay Dalka Hindiya.
Haddaba, sababta qoyskan loogu diiday inay diyaaradaasi raacaan ayaan ahayn sabab lagu qanci karo, waxaanay shaqaalahaasi qoyskaasi ugu diideen safarkaasi in Ilmo yar oo ka mid ah qoyskaasi uu oohin joojin waayey.
Qoyskaasi ayaa sheegay in sababtaasi aanay aheyn sabab rasmi ah oo lagu qanci karo, balse ay arrintaasi ka tahay shirkadaasi Cunsuriyad badheedh ah.
Dhacdadani ayaa lagu baahiyey Wakaaladaha wararka ee Dalka Britain oo Wargeyska Himilo ka soo xigtay.
Aabaha qoyskaasi ayaa sheegay in mid ka mid ah Shaqaalaha diyaaradaasi uu ugu hanjabay in haddii ilmihaa yari uu oohinta joojin waayo uu Daaqada ka tuuri doono, taasina waxay khilaaf ka dhalisay socdaalkii, sidaasi awgeedna waxay ku dambeeyey khilaafkaasi in diyaaradii laga dejiyo oo waliba loo diido inay shirkadaasi raacaan.